XUKUN: Maxakamad Xukun Kasoo Saartay Tartanka Super League - FIFA Iyo UEFA Oo Waji Gabax La Kulmay - Laacib
HomeWararka Champions LeagueXUKUN: Maxakamad Xukun Kasoo Saartay Tartanka Super League – FIFA Iyo UEFA Oo Waji Gabax La Kulmay
XUKUN: Maxakamad Xukun Kasoo Saartay Tartanka Super League – FIFA Iyo UEFA Oo Waji Gabax La Kulmay
April 20, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Xidhiidhada kubadda cagta ee FIFA iyo UEFA ayaa lagu amray in ay faraha kala baxaan tartanka Super League, waxaana loo sheegay in aanay lahayn awood sharci oo ay ku joojiyaan.
Maxkamad ku taalla waddanka Spain ayaa go’aan kasoo saartay khilaafka ka taagan ciyaaraha Yurub, kaas oo abuurmay Axaddii markii ay kooxaha waaweyn ee qaaraddaasi ku dhawaaqeen tartan cusub oo u gaar ah oo loogu magac-daray European Super League oo ay ka qayliyeen xidhiidhada kala duwan iyo horyaalladu.
Maamulka tartanka cusub ee ESL ayaa dacwad u gudbiyey maxkamad ku taalla waddanka Spain, iyagoo eedaynaya UEFA iyo FIFA oo ku hanjabay in ay samayn doonaan wax walba oo ay tartankan ku joojinayaan.
Maxkamadda ayaa qaraar ay soo saartay waxay ku sheegtay in FIFA iyo UEFA aanay awood u lahayn in ay joojiyaan Super League, isla markaana ay faraha kala baxaan.
Warqad kale oo ay shar-ciyaqaana ESL u gudbiyeen FIFA iyo UEFA oo ay heshay warbaahinta BBC-da ayaa waxay ugu sheegeen shuruucda ay daliishanayaan kooxaha tartankan samaysay ee iyaga ilaalinaya, kuwaas oo ay kaga guuleysanayaan isku day kasta oo ay sameeyaan FIFA iyo UEFA.
Sharci-yaqaannadan ayaa waxay qoraalkooda ku sheegeen in ay isku diyaarinayaan si adag, si ay qaab sharci ugaga guuleystaan FIFA iyo UEFA, maxkamadahana geyn doonaan haddii ay qaadaan tallaabooyin ay isku dayaan in ay ciqaabaan kooxaha.
Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa maalinta Jimcaha kulan aan caadi ahayn yeelanaya, waxaana laga filayaa in ay soo saaraan go’aamo ay suurtogal tahay, in kooxaha Real Madrid, Manchester City iyo Chelsea lagaga caydhiyo tartanka Champions League ee ay semi-finalka joogaan. Sidaas oo kalena ay u ganaaxayaan Manchester United iyo Arsenal oo Semi-finalka Europa League usoo gudbay.
Si kastaba, 12ka kooxood ee waaweyn ee Yurub ayaa adeegsan doona shuruucda caalamiga ah ee iyaga ilaalinaysa, isla markaana dacwad waqti horeba u gudbiyey maxkamadda.